ဆယ်ကျော်သက်အပျိုပေါက်လေးကျွန်မ – CHAR TAKE
သမီးရေ……သဲသဲ”’သဲသဲဆိုသော ၁၆ နှစ်အရွယ် ကောင်မလေး ဖြူဖွေးနူးစွတ်ပီး အင်မတန်ချစ်ဖို့ကောင်တဲ့ မေလေးတယောက် ရှင်’ မေကြီး …. သမီးစာသင်ဖို့ Guide ငှါးထားတယ် ။ အာမေကြီးကလဲ ခုမှကျောင်းဖွင့်ကာစကို ” စာကြိုးစားရမှာပေါ့ သမီးသဲသဲရယ် ‘Guideဆရာလေးက အင်ဂျင်နီယာနဲ့ ဘွဲ့ရထားတာသမီးရဲ့ ဟင်”””ဆရာတဲ့'(သဲသဲအံသြသွားသည်) ဆရာမ’ မဟုတ်ဖူးလား မေကြီးကလဲ.” တော်ပီသဲသဲ „အရစ်မကြောင်းနဲ့တော့ မနက်ဖန်ကစ စာသင်ရမယ်ဒါပဲ ။ မေကြီးသည်ပြောဆိုပီးနေရာမှထ ထွက်သွားသည် ။
ဒီလိုနဲ့နောက်နေ့ညနေ ဆရာဆိုတဲ့လူကြီး အိမ်ကိုရောက်လာပါသည် ။ သဲသူ့ ကိုကျိမရ ဘာကြောင့်မှန်းမသိ မုန်းသည် ။ သို့သော် ဆရာဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ဆက်ဆံသင့်သည်ဟု သဲတွေ့ထားပါသည် ။သဲတို့အိမ်က နှစ်ထပ်တိုက် အတော်လုံခြူံသည် ။ အပေါ်ထပ်ကလှမ်းအော်လဲ အောက်ကမကြားနိုင် သဲမှာမေမေပဲ ရှိတော့တယ်လေ ။ ဒါကြောင့်သဲမေမေ့ကို စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ ။
” ကျနော်ဘယ်မှာစာသင်ရမလဲခဗျ'” ဆရာဆိုတဲ့လူမှ အသံပြူလာသည် မေကြီးကဆရာကို အိမ်ပေါ်ထပ်သို့လိုက်ပြရာ သဲလဲလွယ်အိတ်ယူပီး တခါထဲစာသင်ရန် ဆရာ့နောက် လိုက်ခဲ့ရပါသည် ။ ထို့နောက်ဆရာသောက်ဖို့ ကော်ဖီနဲ့ မုန့်ချပေးပီး စာအုပ်တွေထုတ်ကာ စတင်သင်ရပါသည် ။သဲသဲတယောက် အဲ့တော့မှ သေချာသ တိထားမိလိုက်သည် ။ ဆရာက ၂၇ ဝန်းကျင် ရင်အုပ်ထွားထွား အရပ်မြင့်မြင့်နဲ့ တောက်ပတဲ့ မျက်ဝန်းအစုံရှိပီး အလွန်ယောင်္ကျားပီ သပါတယ် ။ သဲသဲစိတ်ထဲ မရိုးမရွကြီးလဲ ဖစ်လာပါတယ် ။ နောက်မှငါဘာတွေတွေးမိပါလိမ့်လို့ ပြန်ဆင်ခြင်ပီးစာထဲ အာရုံနှစ်လိုက်ပါတယ် ။
ဆရာနဲ့သဲသဲ အတော်အဆင်ပြေလာပါပီ ။ ဆရာတပည့်ထက် ပိုရင်းနှီးလာပါ တော့တယ် ။ တစ်ညနေဆရာက’သဲသဲ”’ရှင်” ဆရာ့ကို ပိုရင်းနှိးသွား အောင် အကိုလို့ပြောင်းခေါ်ပါလား ”ဟု စကားစလာပါသည် ။ သဲကလဲဘာမှ အပန်းမကြီးတာမို့ ပြောတဲ့တိုင်းအကိုလို့ပဲ ပြောင်းခေါ်ဆိုပါတယ် အဲ့လိုနဲ့ တနေ့ ဆရာစာသင်ဖို့ ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ ဆရာ့အတွက် ကော်ဖီယူလာရင်းစာအုပ်ကို ခလုတ်တိုက်ကာ ဆရာ့အပေါ် သဲလဲကျသွားပါတော့တယ်။အမလေး ” ဗုန်း” သဲကိုယ်လူံးလေး ဆရာ့ရင်ဘက်ကြီးပေါ် မှောက်ရက်လေးလဲကျသွားခဲ့ပါတယ် ။ ဆရာ့လီးနဲ့သဲအဖုတ်လေးကလဲ ပူးကပ်သွားပါတယ် ။
‘ရရဲ့လားသဲ” ဆရာကမေးရင်းသဲကို ဘယ်ချိန်ထဲက ခါးကနေပွေ့ ထားလဲမသိတော့ပါဖူး… ဆရာစကားစပြောတော့မှ အသိပြန်ဝင်ပီး သဲရှက်ရှက်နဲ့အောက်ဆင်းပြေးခဲ့ရပါတယ် ။ အဲ့တော့မှ သဲသဲယောင်္ကျားတယောက်နဲ့ ပတ်သတ်ပီး ပထမဆုံး ရင်ခုန်ခဲ့ဖူးပီလေ ။ အော်ဆယ်ကျော်သက် ရင်ခုန်သံဆိုတာဒါကိုးလို့ကြိတ်တွေးမိရင်း နောက်တနေ့ ဆရာရောက်လာပါတယ် ။သဲကသာစိတ် တွေဖောက်ပြန်နေတာ ဆရာကတော့ပုံမှန်ပါပဲရှင် ။ တည်ငြိမ်တဲ့ အမူယာနဲ့ သဲကို စာသင်ပြပေးဖို့ ရောက်ရှိလာပါတယ် ။ အဲလိုနဲ့..သဲနဲ့ဆရာအရင်လိုပဲပူံမှန်စာသင်ရင်းနဲ့ သဲစာမေးပွဲဖြေမယ့်ညမှာ ဆရာက အချိန်ပိုသင်ပေးပါတယ်။
ဖြစ်ချင်တော့ အဲ့ညက မေမေ့အကို ဝမ်းကွဲကားတိုက်လို့ မေမေ ဆေးရုံ လိုက်သွားရမယ့် အခြေနေပါ ဆရာ “အန်တီဆေးရုံ လိုက်သွားရမှာမို့ စာသင်ရင်းနဲ့ အိမ်ကိူတူတူ စောင့်ပေးနိုင်မလားလို့ အကူညီတောင်းပးမေးပါတယ်…ဆရာကလဲ…”ရပါတယ်အန်တီရယ် ကူညီကရမှာပေါ့”စာမေးပွဲအတွက်လဲအဆင်ပြေသွားတာပေါ”လိုပြန်ဖြေပါတယ်.. မေမေအိမ်က ထွက်သွားပီးစာဆက်သင်ကြပီး ခနအကြာမှာ…မိုးတွေရွာချလာပါတယ်..ထုံးစံတိုင်းမိုးရွာပီးတာနဲ့မီးကလဲ တိခနဲပြတ်ပီး မှောင်မဲအတိဖစ်သွားပါတယ်…
အဲ့တော့မှဆရာက “သဲကြောက်နေလား…ဆရာ့နားလာထိုင်” ဟု ခေါ်ပါတယ် ။ သဲလဲကြောက်ကြောက်နဲ့ ဆရာဘေးစမ်းတဝါးဝါးနဲ့ သွားထိုင်လိုက်ပါတယ် .. မှောင်မဲနေတဲ့ အိမ်တအိမ်ထဲမှာ သူစိမ်း ယောင်္ကျားလေးတယောက်နဲ့နေရတာဟာ သဲအတွက်အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားရပါတယ်… စိတ်လှုပ်ရှားရလွန်းလို့ သဲပေါင်ကြားလေးကတောင် စိုစိုလေးဖြစ်လာပါတယ်… အဲ့ချိန်မှာဆရာက သဲခါးလေးကို လှမ်းဖက်လိုက်ပါတယ်…. “အို့ဆရာ” သဲလန့်သွားပါတယ်ပီးတော့ဆရာက သဲမျက်နှာကို သူ့ဘက်ဆွဲလှည့်ပီးနှဖူးလေးကိုဖွဖွလေးနမ်းလိုက်ပါတယ် ။ ပီးတော့သဲရဲ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို သူ့လျှာကြီးနဲ့လာယက်နေပါတယ်..
“ပလပ်” အိုဆရာရယ် နှလုံးသားတွေ ကြွေကုန်ပီကွယ်…ပီးမှသဲနှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးတွေကို စုပ်နမ်းပါတယ်.. သဲလေ ဆရာ့ရဲ့အနမ်းတွေအောက်မှာကျရူံးသွားခဲ့ပါတယ်.. အွင့်အင့်အင့်” ” သဲနှုတ်ခမ်းက ညီးသံလေးတွေလဲ ထွက်လာပါတယ်…ဆရာက နမ်းနေတာကိုမရပ်ပဲ သဲလျှာလေးကို လာဆွဲစုပ်နေပါတယ်တယ်… အဲ့ချိန်မှာဆ ရာလက်တဖက်က သဲရင်သားတွေနားကိုရောက်လာပီး သဲရဲ့နို့အုံနှစ်ခုကို ဖြှစ်ညှစ်နေပါတယ် ” အို အို အဟင့်” ဆရာရယ် ” သဲမတားနိုင်ပါဖူး အထိတွေ့တွေ့က သာယာလွန်းနေတယ်လေ…
” အဲ့တော့မှဆရာက နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းနေတာကို ရပ်လိုက်ပီး သဲကိုသူ့ပေါင်ုကြားထဲ ထိုင်ခိုင်းကာသဲကို သူ့အပေါ်မှီ ခိုင်းပီးသဲလည်တိုင်လေးကို စုပ်နေပြန်ပါတယ်… ပြွတ်ပြွတ် ” ပကျွတ်စ်” ဆရာ့လက်တွေက သဲရဲ့အကျီအောက်လျှိူဝင်လာပီး ဗယာစီရာအောက်ကနေ တိုးထွက်နေတဲ့နို့လေးနှစ်လုံးကိုစိတ်ကြိုက်ပွတ်သတ်နေပါတယ်.. အရမ်းကောင်းတဲ့ ခံစားမူ့ပါရှင်.ထိုစဉ် ဖြတ်ခနဲတအိမ်လုံး မီးလင်းသွားပါတယ်..သဲလေရှက်လွန်းလို့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ … ဆရာကသဲကိုပွေ့ကနဲချီပီး သဲအခန်းကိုချီသွားပါတယ် အခန်းထဲရောက်တော့ ကုတင်ပေါ်ပက်လက်လေးချ ဘော်လီကြိုးကိုဖြုတ် အကျီကိုဆွဲချွတ်ပီး သဲနို့လေးနှစ်လုံးကို သေချာကြည့်နေတယ်ရှင်,
” လှလိုက်တဲ့ နို့လေးတွေပါလား ကလေးရယ်” ဆရာနော်လို့ပြောပီးရင်သား တွေကို အုပ်ဖို့လုပ်တဲ့အချိန်မှာ..ဆရာ့လက်တွေက သဲလက်လေးနှဖက်ကိုချုပ်ပီးဘေးတဖက်ဆီကို ကပ်ချုပ်ထားပါတယ် ညာဘက်နို့သီးလေးကိုလဲ နှုတ်ခမ်းနဲ့ တပြွတ်ပြွတ်မြည်အောင် စုပ်နေပါတယ်..သဲနို့လေးကိုကလေးတယောက်လိုပဲအငမ်းမရ တဖက်ပီးတဖက်ပြောင်းစို့နေပါတယ်…. “အင့်အဟင်းးအိုး” ကောင်းလိုက်တာ ဆရာရယ် ” လို့ထုတ်ပြောမိတဲ့ ထိဖြစ်သွားပါတယ်… ချစ်တယ်ကလေးရယ်” လို့ပြောပီးပါးကို ရွှတ်ခနဲနမ်းပါတယ်…ပီးတော့ ကိုလို့ခေါ်ဖို့ပြောပါတယ်သဲလဲ ” အရမ်းချစ်တယ်ကိုရယ် “လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
တကယ်လဲသဲ ကို့ကိုယ်အရမ်းချစ်မိသွားပါပြီ..ပြီးတော့ကိုလေသဲရဲ့ ဘောင်းဘီလေးကိုဆွဲချွတ်ပါတယ်… ဘောင်းဘီလေးကျွတ်သွားလို့ ပေါ်ထွက်လာတဲ့သဲရဲ့စောက်ပက်လေးကို သေချာအနီးကပ်ကျိနေပါတယ်…သဲပေါင်နှချောင်းကိုလဲ ဖြဲကားလိုက်ပီးသဲရဲ့ စောက်စိလေးကိုပြွတ်ခနဲ ဆွဲစုပ်လိုက်ပါတယ်… အား” ကို ” စောက်စိလေးကိုပဲ ထပ်ခါထပ်ခါစုပ်ပေးနေပါတယ်.သဲစောက်ပက်ထဲကအရည်တွေထွက်လာအောင်ထိကို ချစ်တာတော်လွန်းပါတယ်…
“”ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်ပြွတ်” ” စုပ်တယ်ကိုလေအားမနာဖူး သဲရဲ့စောက်စိလေးကိုအတင်းကိုဆွဲစုပ်နေတာ…”ကောင်းလားကလေး” ကိုနော်ဘာတွေမေးနေမှန်းမသိဖူး”ဖြေကွာ ကလေးရာ”ကဲ! ကောင်းပါတယ်ကိုရာ ကိုစုပ်ပေးတာအရမ်းကောင်းတယ် ” စောက်စိလေးကိုကျင်’နေတာပဲ”အရမ်းကောင်းတယ်” ကျေနပ်ပီလားလူဆိုး”” ဟား ဟား ကျေနပ်ပါတယ်ဗျာ” ကိုလေ သဲစောက်ပတ်နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖြဲလိုက်ပီး လျှာကြီးနဲ့စောက်ပက်လေးထဲထိုးမွှေလိုက်ပါတယ်ကိုလျှာကြီးက သဲစောက်ပက်ထဲမှာမွှေလိုးနေပါတယ်…ကိုလေသူ့လျှာကြီးနဲ့သဲစောက်ပက်လေးကိုလိုးနေပါပြီ….အား.ကို ကို ကိုရယ် အ အ အား သဲညည်းနေရပါပြီ.
ပြွတ်”ဟင်ကို အစိလေးကို စုပ်နေပြန်ပီ.. စောက်ပက်လေးကိုလဲ လျှာကြီးနဲ့ပင့်ပင့်ပီးယက်နေပါတယ်.. အိုး သဲကော့ကော့ပီး ကို့မျက်နှာနဲ့သဲစောက်ပက်ကြီးနဲ့ဖိကပ်လိုက်ပါတယ်… အိုအအာားးအား သဲစောက်စိလေးမခံမရပ်နိုင်အောင်ကျင်တက်လာပီး အရည်တွေပန်းထွက်လာပီးတချီပီးသွားပါတယ်… ကို ကလေးလဲ ကို့လီးကြီးစုပ်ကျိချင်တယ် …အာကလေးကစုပ်တတ်လို့လား.မစုပ်တတ်လဲစုပ်မှာပဲ . ကဲဒါဆိုလဲကလေး သဘောကွာဆိုပီး ကိုကသူ့လီးကိုဘောင်းဘီအပြင်ထုတ်ပီး သဲမျက်နှာနားထိုးပေးပါတယ်.အဲ့တော့မှသဲလန့်သွားပီးအရမ်းလဲ စိတ်လှုပ်ရှားသွားရပါတယ်..
အကြောင်းကတော့ ကို့လီးကြီးက အစွမ်းကုန်ထောင်မတ် ပီးအကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ ဒစ်ကလဲ ရဲမှည့်နေတဲ့ ၇ လက်မလောက်ရှိတဲ့ စံချိန်လီးဖြစ်လို့ပါ.သဲနားကပ်နေတဲ့ ကို့လီးဒစ်လေးကို သဲလျှာဖျားလေးနဲ့ပတ်ရစ်ပီးယက်လိုက်ပါယ်သဲလက်တွေက ကို့ရဲ့ဘောလေးကိုကစားကာ ကို့လီးဒစ်ကို အသာစုပ်ပေးမိပါတယ် ကိုလေ ” အားကောင်းလိုက်တာကလေးရယ်”နဲ့ ညည်းသံတွေထွက်လာပီး သဲခေါင်းကိုကိုင်ပီးသူ့လီးကို သဲပါးစပ်ထဲအတင်းကော့ သွင်းပါတယ်.အင့် အင့်,’,’ သဲလဲကိုကော့ထိုးတဲ့ အတိုင်းအလိုက်သင့်နေပီး လီးပြန်ထွက်ခါနီးဆို ဒစ်လေးကိုပြွတ်ခနဲမြည်အောင်စုပ်ပေးရင်းနဲ့……ကိုက ‘တော်ပီကွာကလေးရယ် ကိုပြီးတော့မယ်…
ကလေးကို အစွမ်းကုန်ချစ်ချင်သေးတာ..လို့ပြောပီး သဲကိုလှဲချကာ သဲပေါ်ကိုတက်လာပါတယ် …..သဲရဲ့ လက်နှချောင်းကို သူ့လက်နှဖက်နဲ့ချုပ်ပီးကိုင်ထားပါတယ်..သဲရဲ့ပေါင်လေးတွေကို လဲဘေးကိုဖြဲကားပီး သဲနှုတ်ခမ်းကိုလဲနမ်းနေပါတယ်….သဲပုံစံက လက်ကိုအပေါ်ကို ပစ်ပေါင်နှချောင်းဖြဲကားပီး တော်တော်တော့ စိတ်ထ စရာပါကိုလေသူ့လီးနဲ့သဲ စောက်ပက်လေးကိုလာလာထိုးနေပါတယ်…လီးဒစ်ကြီးနဲ့သဲစောက်စိလေးကိုကလော်ထိုးလိုက် စောက်ပက်အဝလေးထဲထိုးလိုက်နဲ့ လုပ်နေပါတယ်…… သဲစောက်ပက်လေးထဲကတခါမှမခံစားဖူးတဲ့ခံစားမူ့မျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်…အအားကိုရယ်
ကိုကလေသူ့လီးကိုသဲစောက်ပက်ထဲ မပြောမဆိုနဲ့ ထိုးထဲ့လိုက်ပါတယ်.လက်တဆစ်လောက်ဝင်သွားပီး သဲအရမ်းကိုနာကျင်သွားတယ်လေ..အပျိုလေးလေ … “အားကိုမရဖူး ကိုကလေးကြောက်တယ် ပြန်ထုတ် အားး” ကိုလေပြောလို့လဲ မရတော့ပါဖူး .. ဗြွတ်” ထပ်ထဲ့ပါတယ် နောက်ထပ်လီးကြီးကသဲစောက်ပက်ထဲဝင်ပီးသဲအပျိူမှေးကိုလာထောက်တော့ သဲအောင့်ခနဲဖြစ်သွားပါတယ်..အရမ်းကိုနာတာရှင့် သဲမျက်ရည်စလေးတွေပါကျတယ်ရှင်.ကိုကဆက် မထဲ့တော့ပဲ ဝင်သလောက်ကိုပဲ ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်နဲ့ လိုးပေးနေပါတယ်. လိုးနေရင်းနဲ့ သဲမျက်နှာကို ငုံ့ကျိရင်း အရသာခံနေပါတယ်…အဲ့လိုနဲ့ အချက်၅၀လောက်မှာသဲခုနကနာကျင်တာတွေ မရှိတော့ပဲ အရည်တွေလဲစိုရွှဲနေပါပြီ….
ခနနေတော့”ဖောက်”ဘွတ်”ဆိုတဲ့အသံနဲ့အတူ ကို့လီးကစောက်ပက်ထဲတဆုံးဝင်သွားပီး ဆီးခုံ နှခုရိုက်သံလဲ ထွက်ပေါ်လာပါတယ်အားအားကိုရယ် နာတယ်ကို ကိုကလေးကို မသနားဖူးလား”ပြောလဲကိုမရပ်ဖူးအတင်းကိုလိုးနေတယ်ရှင်…သဲလေကို့ရင်ခွင်အောက်ကနေလှိမ့်နေအောင်ခံနေရပါတယ်…”ခနနေကလေးအရမ်းကောင်းသွားမှာပါ တခွန်းပဲပြောပီး.သူ့လီးကိုသဲစောက်ပက်ထဲတဆုံးထဲ့ပီးလိုးနေပါပြီ….ဘက်”ဘက်”အွမ့် အာအအအား” အား… အား အော်ညည်းနေရပါတယ် ။ အချက်၎ဝလောက် ဆောင့်လိုးအပြီးမှာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့နာတာရောကောင်းတာရောပါခံစားလာရပြီးသဲဖင်လေးကိုကော့ပေးနေမိပါတယ်….
” အား ဟင့်ဟင်းးးအင့်အင့်” ကိုလေသဲကိုချုပ်ထားတဲ့လက်တေကိုလွှတ်ပီး ချိုင်းအောက်ကနေလက်လျှိုပီး သဲပုခုံးနှဖက်ကနေ ဆွဲဆွဲဆောင့်လိုးပါတယ်.မရပ်ဖူးလုံးဝမရပ်ဖူး.ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးနေတာ..တခါခါသဲနို့လေးတွေကိုကုန်းကိုက်ပါသေးတယ် အားကောင်းလိုက်တာကလေးရယ်လို့ပြောပီး ပိုဆောင့်ပါတယ်….. အ အအ အသက်ပါလွန်းတဲ့ကိုရဲ့ဆောင့်လိုးချက်တွေအောက်မှာ သဲစောက်ပက်ထဲကအရမ်းယားလာပီး တအားအားနဲ့ညည်းကာ သဲစောက်ရည်တွေလျှံထွက်ပီးတချီပီးသွားပါတယ်…….. အဟင်းးးအင့်အင့် သဲတချီပီးသွားပီး ခေါင်းလေးစောင်းကာအမောဖြေနေတုန်းပဲရှိသေးတယ်… ကိုလေ သူ့လီးကိုလေဆီးခုံချင်းထပ်အောင်ဖိကပ်ပီးမွှေနေပါတယ်…..
အား ကိုရယ်ကောင်းလိုက်တာကိုရယ်”အ အ ကိုလေလီးကြီးနဲ့စောက်ပက်လေးထဲအတင်းမွှေလိုးနေပါတယ်…သဲလဲကို့ခါးကြီးကိုဖက်ထားပီးကိုလိုးတဲ့တိုင်းအောက်ကနေ ကော့ခံနေရပါတယ်…သူ့လီးကိုဆွဲထုတ်တယ် အရှိန်ပြင်းပြင်းပြန်ထဲ့တယ်..နို့တွေကိုစို့တယ်.ဆောင့်လိုးတယ်အတင်းပဲ…သဲစောက်ပက်အတွင်းသားတွေကလဲကို့လီးကိုအရမ်းဆွဲညှစ်နေမိပါတယ်.. ၃မိနစ်လောက်အပေးယူညီညီလိုးပီးတဲ့အခါ သဲရဲ့အကြောတွေအတင်းတုန်တက်လာပီးတတိယ အချီပီးသွားခဲ့ပါတယ်. သဲရဲ့စောက်ပက်အတွင်းသားလေးတွေကဖြှစ်ညှစ်မူ့ကြောင့်ကိုလဲလီးကြီးကိုဖိဆောင့်လိုးထဲ့ရင်းသုတ်ရည်တွေသဲစောက်ပက်ထဲပန်းထဲ့ပီးသဲပေါ်မှောက်ရက်အိပ်ချလိုက်ပါတယ် .
အမောပြေမှနှယောက်သား ရေချိုးအဝတ်စားလဲကာ စာသင်ခုံပြန်ထိုင်ပီး နှုတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းပါတယ်…တီတီတီ”’ မေမေ့ကားသံကြားရတယ် မေမေပြန်လာပီထင်တယ် ကို”အင်း ကလေး” အဲ့ဆို ကိုပြန်တော့မယ်…စာသေချာကျက်ဦး ” ကိုနက်ဖန် ညလာခဲ့မယ် ကလေးလေး လို့ဆိုကာ နဖူးလေးနမ်းပီး အိမ်အောက်ဆင်းသွားပါတယ် မေမေနောက်ညတွေရော ဆေးရုံသွားဦးမှာလား ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့တင်…. ပြီးပါပြီ ။ CRD